Abakhiqizi Nabahlinzeki Bempahla Engavuthiwe |I-China Raw Material Factory
Inhlonipho & Izitifiketi
Enza ngendlela oyifisayo i-Organo Gold Organ...
I-Ganoderma Cafe Iyathengiswa Okushisayo ...
I-Bulk Organic Cell-wall ephukile...
I-Bulk Ganoderma Lucidum Rei...
Ibhokisi le-Sigmatic Mushroom emine...
I-Chaga mushroom powder
I-Chaga, eyaziwa ngokuthi i-Inonotus obliquus, isikhunta somuthi esikhula ezihlahleni ze-birch ezimhlophe.Ikhula kakhulu enyakatho nenkabazwe ku-40 ° ~ 50 ° N latitude, okungukuthi, iSiberia, Far East, Northern Europe, Hokkaido, North Korea, Heilongjiang enyakatho yeChina, i-Changbai Mountain eJilin, njll.
I-Coriolus versicolor – eyaziwa nangokuthi i-Trametes versicolor kanye ne-Polyporus versicolor – iyikhowe elivamile le-polypore elitholakala emhlabeni wonke.
I-Coriolus versicolor iyikhowe lomuthi elimiselwe kabanzi ukuvimbela nokwelashwa komdlavuza kanye nokutheleleka eChina.Kufakazelwe kabanzi ukuthi izithako ezitholwe ku-Coriolus versicolor zibonisa uxhaxha olubanzi lwemisebenzi yebhayoloji, okuhlanganisa imiphumela evuselelayo kumangqamuzana omzimba ahlukene kanye nokuvimbela ukukhula komdlavuza.
I-Shiitake mushroom powder
Amakhowe e-Shiitake (igama lesayensi: Lentinus edodes) abizwa ngokuthi ama-Shiitake e-Japan.Amakhowe eShiitake asetshalwe eChina izinkulungwane zeminyaka.Amakhowe e-Shiitake aqukethe izithako ezihlukahlukene eziphilayo eziye zaqinisekiswa ucwaningo lwesayensi.Badlala indima ebalulekile ekulawuleni amasosha omzimba, ukwandisa impilo yamathambo, ukwehlisa i-cholesterol nokuthuthukisa impilo yenhliziyo.
“I-Maitake” isho ikhowe elidansa ngesiJapane,igama layo lesiLatini: Grifola frondosa.Ikhowe kuthiwa lithole igama ngemuva kokuthi abantu bedanse injabulo ngokulithola endle, lezi yizinto ezimangalisayo zokuphilisa.
I-Grifola frondosa iqukethe izinhlobonhlobo zezithako ezisebenzayo zebhayoloji eziqinisekiswe ucwaningo lwesayensi.Badlala indima ebalulekile ekwehliseni umfutho wegazi, ukwehlisa ushukela wegazi, ukuqinisa amasosha omzimba, ukulwa nokuvuvukala, nokulwa nokungezwani komzimba.
I-Cordyceps Sinensis Mycelia Powder
I-Cordyceps militaris (igama lesayensi:Cordyceps militaris) kanye ne-Cordyceps sinensis (igama lesayensi: Cordyceps sinensis), eyaziwa nangokuthi amakhowe anamandla, avame ukusetshenziswa emithini yaseShayina ukondla amaphaphu nezinso, nokuvikela inhliziyo.
I-Lion's Mushroom Powder
I-Lion's mane (i-Hericium erinaceus) iwuhlobo lwamakhowe okwelapha.Isikhathi eside sisetshenziswa emithini yendabuko yamaShayina, umhlwenga webhubesi utholakala kabanzi ngendlela yokwengeza.Ucwaningo lwesayensi lubonisa ukuthi umhlwenga webhubesi uqukethe izinto eziningi ezikhuthaza impilo, okuhlanganisa ama-antioxidants kanye ne-beta-glucan.
Ikhowe le-Lion's mane liqukethe izithako ezihlukahlukene eziphilayo eziye zaqinisekiswa ucwaningo lwesayensi.Idlala indima ebalulekile ekuvikeleni isisu, ukulungisa izinzwa zobuchopho, ukuthuthukisa inkumbulo nekhono lokucabanga, njll.
I-Wholesale Organic Ganoderma lucidum Extract
I-Ganoderma lucidum extract iyisithelo esisha esivuthiwe esivunwa ngesikhathi.Ngemuva kokumisa, ithatha ukukhishwa kwamanzi ashisayo (noma ukukhishwa kotshwala), ukugxila kwe-vacuum, ukomisa isifutho nezinye izinqubo ukuze kutholwe i-Ganoderma lucidum extract powder, okuyi-high-concentration ye-Ganoderma lucidum powder.
I-Organic Cell-wall ephukile i-Ganoderma lucidum Spore powder
Izinhlamvu ze-Ganoderma zingamaseli okuzala ayimpuphu akhishwa ku-cap ye-Ganoderma ngemva kokuba imizimba ethela izithelo isivuthiwe.Imbewu ngayinye ingama-microns angu-5-8 kuphela ububanzi.I-spore inothile ngezinto ezihlukahlukene ze-bioactive ezifana ne-Ganoderma polysaccharides, i-triterpenoids ganoderic acid ne-selenium.
I-Coriolus versicolor kanye ne-Polyporus versicolor - i-polypore mushroom evamile etholakala emhlabeni wonke.Okushiwo 'imibala eminingana', i-versicolor ichaza ngokuthembekile lesi sikhunta esibonisa imibala ehlukene.Ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi umumo wayo nemibala eminingi ifana neyenyamazane yasendle, i-T. versicolor ngokuvamile ibizwa ngokuthi umsila we-turkey.
I-Organic Ganoderma Yomkhiqizo Wokunakekelwa Kwezempilo
Izingcezu ze-GanoHerb organic ganoderma sinense zinqunywa emizimbeni ethela izithelo yelogi ekhethwe kahle etshalwe kahle ye-ganoderma sinense.Izingcezu eziqotshwe kahle zingasetshenziswa ngokuqondile ekwenzeni itiye le-ganoderma, ukupheka isobho kanye nokuphiswa kwewayini.Kuyisinqumo esihle ukugcina impilo yansuku zonke, ukwelapha ngokudla futhi ukwethula njengesipho.1. Ukucaciswa: 20kgs/ibhokisi 2.Imisebenzi Esemqoka: Ingasiza ekondleni ubungqabavu babasebenzisi futhi ikhulule ukugula, ukukhwehlela, isifuba somoya, ukushaya kwenhliziyo kanye ne-anorexia.3. Ukusetshenziswa & ...
I-Wholesale Price Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel
Lawa mafutha ezinhlamvu asebenzisa ubuchwepheshe bokukhipha i-CO2 obunamandla kakhulu ukuze akhiphe ezinhlamvu eziphelelwe amanzi emzimbeni, ezikhiqizwa ngezinqubo zokukha, ukuhlanza, ukuhlola, ukubhodlozwa kodonga lwamaseli okushisa okuphansi.
Izingcezu ze-Organic Ganoderma lucidum
Inkampani yethu i-Draft of Chinese National Standard ye-Ganoderma lucidum (noma ebizwa nge-Reishi), i-Ganoderma lucidum (noma ebizwa nge-Reishi) izithako ezimbili eziyinhloko i-Ganoderma Lucidum(reishi) Polysaccharide ne-Triterpene.
I-Organic Ganoderma lucidum (Reishi) Umhlinzeki we-USA, EU, Japan kanye nesitifiketi se-organic sase-China.ISO, HACCP, Halal, Kosher, kanye ne-FDA eqinisekisiwe.
Isampula yesithelo samahhala
IFUJIAN XIANZHILOU NUTRAINDUSTRY CO. LTD.